“Ha iga sugina inaan is dhiibo” – Olivier Giroud – Gool FM
“Ha iga sugina inaan is dhiibo” – Olivier Giroud
(Chelsea) 20 Nof 2018. Weeraryahanka xulka qaranka Faransiiska iyo kooxda Chelsea ee Olivier Giroud ayaa iska diiday inuu is dhiibo sababa la xiriira inuusan ciyaarin kulamadii lasoo dhaafay ee Blues.
Macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri ayaa kulamadii lasoo dhaafay wuxuu Giroud ka door biday wiilka reer Spain ee Álvaro Morata, wuxuuna laacibkii hore kooxda Arsenal sheegay inuusan marna niyad jabi doonin, kadib wareysi uu ku bixiyay wargeyska Daily Mail.
“Waxaan xili dambe kasoo laabtay koobka aduunka, kadib soo laabashadeyda waxaan ciyaaray kulamo badan”.
“Maanta macalinka wuxuu adeegsanayaa Álvaro Morata, sababtoo ah wuxuu qabanayaa shaqo fiican, waa run in qaab ciyaareedkeena uu hoos u dhacay, balse isaga wuxuu dhaliyay goolal wuuna kasoo fiicnaaday sidii hore”.
“Waxaan doonayaa inaan u dagaalamo booskeyga, ma doonayo inaan baxo, waan sii joogayaa kooxda Chelsea, mana rajeenayo inaan is dhiibo”.